Nahazo Ny Lokan’ny Human Rights First i Nora Younis Bilaogera Egyptiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, عربي, македонски, Italiano, English
(Marihina fa tamin'ny 23 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nahazo ny Annual Human Rights Award (Lokan'ny Mpiaro ny Zon'Olmbelona fanao isan-taona) androany ilay bilaogera Egyptiana sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Nora Younis.
Nanatontosa ny lanonana fanaony isan-taona ny Human Rights First ary nankalaza ny faha-30 taonany tamin'ny fanomezam-boninahitra ireo mpitolona lohalaharana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. ​​Notronin'ilay mpilalao sarimihetsika Sigourney Weaver izay nanolotra ny loka ny lanonana ary Caroline Kennedy izay nandray ny loka tamin'ny alàlan'ny dadatoany ilay Senatera Ted Kennedy, ary nahitana ny fampisehoan'ilay mpihira Mary Chapin Carpenter.
Hoy i Fustat nitatitra:
Zarainy miaraka amin'i Oleg Kozlovsky ny loka , ilay tanora mpikatroka ara-demaokrasia ao Rosia , firenena iray toa hita fa manalavitra hatrany ny demokrasia isan'andro . Nahazo ny loka tamin'ny maha-mpiaro ny zon'olombelona azy maharitra sy miavaka ihany koa ny Senatera Ted Kennedy.
Tena nanohana tanteraka ny fiarovana ny zon'olombelona ao Egypta ny Human Rights First, nandritra ireo taona faraparany ary nanao fanentanana ho an'i Saad Eddin Ibrahim, izay nahazo ny loka toy izany tamin'ny taona 2002, toa an'i Alaa sy Kareem ihany koa, ary manararaotra izao fotoan-dehibe izao aho hanolorako fiarahabana sy fisaorana eram-po noho ny fanohananareo.
Faly mizara ny fomba nilazan'ny Human Rights First ilay vehivavy bilaogera i Fustat :
Toy izao no filazan'izy ireo momba an'i Nora:
… Rehefa mampiasa tafondro-drano sy kibay ny miaramila Egyptiana mba handroahana ny mpitsoa-ponenana Sodanezy tamin-kerisetra tao amin'ny kianja malalaka ao Kairo, dia teo i Nora Younis , nandray an-tsoratra sy naka sary. Nisarika ny saina iraisam-pirenena ny bilaoginy miresaka ny zava-nitranga momba ny fampijalian'ny governemanta Egyptiana ireo mpitsoa-ponenana marefo. Mbola manohy ny fanairana mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mielipatrana ao Egypta i Nora amin'ny alalan'ny bilaogin-dahatsoratra mandresy lahatra .